लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको विरोध कायमै « Lokpath
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध कायमै राखेको छ ।
निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा एमालेका सांसदले नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य नारायण आचार्यले एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसद पदमुक्त नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान रहेको बताए ।
एमालेको विरोधपछि केहीबेर स्थगित भएर फेरि सुरु भएको बैठकमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीकोतर्फबाट राज्यमन्त्री सहसराम यादवले जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभाका सदस्य रुन्धावती शर्माले गत हप्ता आएको वर्षाले किसानको धान बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले राहतको व्यवस्थाको माग गरे । उनले तत्काल किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रकाशित मिति: २०७८,कार्तिक,११,बिहीवार २०:५४
स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधार प्राथमिकतामा छ : मुख्यमन्त्री केसी
परासी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । स्वास्थ्य र
‘मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ’
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय
लुम्बिनीमा कांग्रेस अधिवेशन : प्रदेश सभापतिका लागि को-को छन् आकांक्षी ?
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ । सो क्रममा नेताहरुले संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबाट
कपिलवस्तुको ६ प्रदेश क्षेत्रमा कांग्रेस अधिवेशन सम्पन्न, कुनमा को ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कपिलवस्तुको ६ वटा प्रदेश क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पाँच